Tablets izikelemu e abantu akhethiwe kuye amathuba zezimali esiguli, futhi-ke, nefomu ethize amagciwane. Ukuze ukwelashwa kusheshe futhi kuphumelele kakhulu kufanele sihlanganise ezihlukahlukene izidakamizwa anthelmintic, kanye yokwelapha ezengeziwe.
Ukulungiselela zomzimba ukuze bayothola ukwelashwa
Lesi yisinyathelo esibalulekile kakhulu. Kungcono ukusebenzisa salolu izidakamizwa ngenjongo "Allohol" noma uwoyela linseed. Lezi zimali kuzokusiza bophezela futhi ngokushesha ngokuthini imikhiqizo anobuthi imfucuza kusukela izimuncagazi emathunjini. Ngemva kwalokho, reception kungenzeka ukuqala imithi main.
Yini anthelmintics ingasetshenziswa?
Ngakho, ake uhambe uye ezibaluleke kakhulu. Hlobo luni amaphilisi izikelemu kubantu kungatholakala Pharmacy zanamuhla?
1. Imithi "Nemazol" ( "Albendazole"). Lesi sidakamizwa kuyinto jikelele - isetshenziswa ukwelapha inqwaba izifo ezibangelwa amagciwane. It has eziningana imiphumela emibi, avame izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka abavamile izimpawu of helminthiasis. "Albendazole" kunqatshelwe kubantu besifazane abakhulelwe.
2. Ukulungiselela "mebendazole". Lezi amaphilisi izikelemu e abantu okuye kwenziwa kuye kwabonisa ngokwabo empini trihotsefaleze, trichinosis, echinococcosis, ascariasis, enterobiasis, teniasis futhi eziningi nezinye izifo. Izimo "mebendazole" - ejwayelekile amalungiselelo yalolu hlobo: ukuzwela umuntu emuthini, isifo sesibindi. Hhayi esetshenziselwa ukwelapha ezinganeni kuze iminyaka 2. Abesifazane abakhulelwe ukuthatha "mebendazole" kungenzeka kuphela imvume kadokotela futhi ngaphansi kokuqondisa kwakhe. Sicela uqaphele ukuthi ukusetshenziswa kwalezi amaphilisi angabangela side effects ukuthi kuphazamise amasistimu ezihlukeneko zomzimba. Ngokwesibonelo, iziguli welashelwa ingase ibe nezimpawu ezithile ezingemnandi ezifana imfiva nohudo, ukucanuzela kwenhliziyo nokuhlanza, izinkinga zokulala, ukuqubuka kwesikhumba, ukulahlekelwa kukuzwa, isiyezi, ubuhlungu bekhanda. Ezimweni ezingavamile, avele ukusangana, kukhona isiyaluyalu.
3. "Dekaris". Lokhu kungenxa amaphilisi ethandwa kakhulu izikelemu kubantu. Umuthi 'Dekaris "lisetshenziswe ascariasis futhi hookworm. Uphuzwe kanye (umthamo ezingane - 50 mg, omdala - 150 mg) kusihlwa emva kokudla. Uma kudingekile, kabusha ukwelashwa kungase kwenziwe ngemva kwesonto. Wakubekezelela kahle izidakamizwa futhi has cishe akukho imiphumela emibi, Nokho, alamukele, kufanele okungenani ngosuku ukulahla ukusetshenziswa uphuzo oludakayo.
4. Kusho "Vermoxum". Lesi sidakamizwa ebhubhisa cishe zonke izikelemu abantu. Odokotela ngokuvamile linqume ngayo uhlu izifo (necatoriasis, ascariasis, ancylostomiasis, trichuriasis, strongyloidiasis, njll). Ngaphezu kwalokho, i-nomuthi "Vermoxum" helminthiasis ngempumelelo uma kuxutshwe, lapho ekhona umzimba kwezinhlobo eziningana izimuncagazi. Njengoba ukulungiselela "Dekaris" sisetshenziswa kanye (mg 50 izingane kanye nabantu abadala 100 mg). You azi ukuthi kusho "Vermoxum" ine phezu kwesibindi nezinso imiphumela anobuthi. Ngakho-ke, nge ukusetshenziswa isikhathi eside, qiniseka ukuthi ihlole igazi ukuqapha isimo kulezi zinhlangano.
5. izidakamizwa "Kombatrin". Leli thuluzi okuphawulekayo ukuthi ingasetshenziswa ngisho iziguli kunani nonke (esuka ezingu-6.). Nokho, abesifazane abakhulelwe kanye nabantu abaphethwe isifo sesibindi, kungcono ukhethe enye izidakamizwa bona. Ngezinye izikhathi imiphumela emibi ziyabonakala ngesimo isikhumba komzimba, isicanucanu, ukuqwasha noma ukozela, uhudo, isiyezi.
Sasixoxa ngaLowo amalungiselelo ethandwa kakhulu ngokumelene izimpethu, kodwa ungakhohlwa ukuthi ukukhetha podhodyascheee kusho ikhumbula izici ngazinye umzimba wakho futhi ezihlukahlukene ezidala kungaba onguchwepheshe. Ngakho-ke kungcono hhayi enothi (njengoba iningi anthelmintics linezizathu amathuba okuba nemiphumela engemihle), futhi ngokushesha zihlolwe futhi iphathwa ngokunamathela izincomo lochwepheshe.
Yini enye okudingeka ukwazi ukwelapha helminth izifo?
Kubalulekile ukuthi Yiqiniso yokwelapha usuphothuliwe wonke amalungu omndeni kanye nezilwane (uma ikhona), ukuze ugweme kabusha ukutheleleka. Ngaphezu kwalokho, uma une izilwane endlini, kufanele kube ngokwabo nezilwane prophylaxis kwemithi njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha.
Ngokuvamile odokotela linqume, ngaphezu umkhiqizo main, futhi chelators ngaphezulu. Lezi amathuluzi asiza unekhemikhali imikhiqizo anobuthi womsebenzi esibalulekile worm. A isidingo esikhethekile kubonakala, uma kuziwa nezifo ezingamahlala khona.
Isigaba sokugcina yokwelashwa
Ngakho, wena kakade indlela ekwelapheni izimpethu emathunjini kubantu. Emva kokuthatha imithi enamandla kudingeka asize umzimba zilulame ngokushesha. Ikakhulukazi, anthelminthics kakhulu eziphula funkitsonirovanie isibindi wesintfu emathunjini, kanye nokuvikeleka encishisiwe. Ngakho-ke, ochwepheshe batusa ukusetshenziswa immunomodulators (magnolia Chinese mvini, Echinacea, eleutrokokk njll), Isiphuzo amavithamini. Ukuze nokwandisa umsebenzi kwesibindi, asetshenziselwa amathuluzi akhethekile - gepatoprotektory ( "Essentiale", "Karsil," njll ...).
Indlela yokusebenzisa "Videstim" (ukhilimu)? Yokusetshenziswa, intengo, ukubuyekezwa
«Iphone kuvaliwe, ukuxhuma iTunes» - yini okumele ngiyenze?
Imisebenzi ye-tikhungo tetenhlalo ukwephulwa yabo
MySQL ukhethe kusuka khetha: izibonelo zalokho opharetha
Cartagena (Colombia): umlando wasendulo, ezikhangayo, iholide
Kuyini coleitis abesifazane? Coleitis: izimpawu kanye nokwelashwa